दयाहाङ भन्दा नाच्न नजान्ने सुरक्षा ! « Ramailo छ
दयाहाङ भन्दा नाच्न नजान्ने सुरक्षा !
समय : 6:46 pm
अभिनेता दयाहाङ राईलाई नाच्न नजान्ने हिरोको रुपमा लिइन्छ । तर दयाले नाचेका ‘सुर्के थैली खै’ र ‘चरी चट्ट’ जस्ता गीतले युट्युवमा करोड माथि भ्युज कमाएका छन् । दयाले कम्मर मर्काएको पछिल्लो फिल्म भैरे को गीत मंगलबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।
‘सनम माया ला को’ बोलको गीतमा दयालाई नायिका सुरक्षा पन्तले साथ दिएकी छन् । गीत रिलिज गर्न मंगलबार आयोजना गरिएको प्रेस मिटमा दया र सुरक्षाले उक्त गीत छायाँकन गर्दाको रमाईलो र नरमाईलो अनुभव सेयर गरे । कार्यक्रमको सुरुमै ‘मलाई यो गीत भन्यो कि गाह्रो लाग्छ’, दयाले भनिहाले, ‘मैंले त डिरेक्टर सापलाई प्रोमो लञ्च गरौं भनेको थिएँ । गीत नै रिलिज गर्नुभयो ।’
यता नायिका सुरक्षा पन्तले पनि आफुलाई नाच्न गाह्रो लाग्ने बताइन् । गीतको सुटिङमा कसले बढी टेक खायो भन्ने प्रश्नमा सुरक्षाले भनिन्, ‘टेक त मैंले नै बढी खाएँ । दया दाई त राम्रो नाच्नु हुन्छ । मलाई त नाच्नै आउँदैछ ।’ उसो त दया भएकै कारण आफु उक्त गीतमा नाच्न उत्साहित भएको सुरक्षाले सुनाइन् ।